Nepalistudio » कोहलपुर वडा नंं ६ मा हुने उप–निर्वाचनमा पाँच दलले गरे उमेद्वारहरुको मनोनयन दर्ता कोहलपुर वडा नंं ६ मा हुने उप–निर्वाचनमा पाँच दलले गरे उमेद्वारहरुको मनोनयन दर्ता – Nepalistudio
जिल्लामा एक मात्र स्थानिय निकाय अन्र्तगत कोहलपुर नगरपालिका वडा नंं ६ मा हुन लागेको उप–निर्वाचनका लागि बुधवार पाँच राजनीतिक दलले आफ्ना उमेद्वारहरुको मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
यही मंशिर १४ गते कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.६ मा वडाध्यक्षको लागि हुन गइरहेको उप निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र समाजवादी पार्टीले आफ्ना उमेद्वारहरुको उमेद्वारी मनोदनय दर्ता गराएका हुन् । बुधवार (नेकपा)को तर्फबाट वटा अध्यक्षमा रामशरण थारु, नेपाली काँग्रेसबाट श्रीकृष्ण थारु, राप्रपाबाट श्रीधर सुवेदी, समाजवादी पार्टीबाट शुभाखर पोख्रेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दीपालक्ष्मी हमालले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बाँकेको कोहलपुरमा बाजागाजासहित पाँच दलका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडाध्यक्षकालागि उम्मेद्वारहरुले झाँकी र पञ्चेबाजासहित उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । निर्वाचन कार्यालयले दिएको समय तालिका अनुसार सबैभन्दा पहिले राप्रपाका उम्मेदवार श्रीधर सुवेदीले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । जुशुलसहित कोहलपुर नगरविकास समिति परिसरमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका सुवेदीले अग्रस्थानमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन । त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार रामशरण थारुले दोस्रो नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसल झाँकी सहित काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरु निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए । त्यसैगरी संघिय समाजवादी फोरमले समेत कोहलपुर वडा नं. ६ को वडाध्यक्षकालागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । हालै नयाँ शक्ती र समाजवादी फोरमको एकतापछि बनेको संघिय समाजवादी फोरमबाट शोभाखर पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । उपनिर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले पनि मनोनयन दर्ता गराएको छ । नेमकीपाबाट दीपालक्ष्मी हमालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन । उनी ईलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरका तत्कालिन प्रमुख दत्तराज हमालकी श्रीमती हुन । निर्वाचन कार्यालयले बिहान १० देखि १ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकेको थियो ।
आगामी मंसिर १४ गते हुने उप निर्वाचनमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा नेपाली कांग्रेशका उम्मेदार श्रीकृष्ण थारुलाई अत्याधिक बहुमतले बिजय बनाउन नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य एवम् स्थानिय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट नगर प्रमुख पदका उमेद्वार भानुभक्त भट्टराईले कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसको विकल्प नभएको दावी गरेका छन् । उनले इतिहासकालदेखि नेपाली काँग्रेसले नै थारु, पहाडी र मधेशी समुदायबीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध काय गर्न नेपाली काँग्रेस नै वर्तमान समयसम्म उद्धत रहेको बताए । मनोनयन दर्ता पछिको नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको कोणसभामा बोल्दै नेपाली जनताको भावना अनुसार वर्तमान कम्यूनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा वडा नं. ६ मा नेकपाले निर्वाचन जित्न नसक्ने बताएका छन् । साथै नेता भट्टराईले नेपाली काँग्रेस का उम्मेद्वारले वडा नं. ६ मा बिजय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले आग्रह गरेकी छिन् । उनले कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै वडाको पूर्वाधार विकास सँगै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि यो वडामा नेपाली काँग्रेसले अघि सारेका उमेद्वारको विकल्प नभइएको जिकिर गरिन् । वडामा रहेको एकमात्र सामुदायिक विद्यालय सिद्वार्थ आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक विकासको लागि वर्तमान समयमा नेपाली काँग्रेसले अघि सारेका वडाध्यक्षका उमेद्वार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्चावित भएपछि मात्र विद्यालयको सर्वाङ्गिण विकास सम्भव भएको बताइन् । भौतिक विकास निर्माण र देशलाई समृद्धीको बाटोमा लैजाने एक मात्र पार्टी नेपाली काग्रेश भएकाले रुख चिन्हमा मतदान गर्न सबै मतदातालाई अनुरोध गरिन ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ का उम्मेदार श्रीकृष्ण बहादुर थारु विकास प्रेमी र समाजसेवी भएकाले सबैले कांग्रेशको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्न कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष निरज चलाउने आग्रह गरे । बुधबार मनोनयन दर्ता संगै नेपाली कांग्रेसले वृहत र¥याली सहित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेको थियो । मनोनयन दर्ता सकिएपछी नेपाली कांग्रेशले कोहलपुर बजार परिक्रम गरि कोणसभा सम्पन्न गरेको छ । उपनिर्वाचन नजिकिदै गर्दा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा निकै चहलपहल बढेको छ ।
२७ कार्तिक २०७६, बुधबार प्रकाशित